Fikradaha naqshadaynta ee 24 Lotus Tattoos Ragga iyo haweenka - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadaynta ee 24 Lotus Tattoos ee ragga iyo dumarka
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah qaababka tattoo loo isticmaalo sida ubax badan. Quruxda tattooankani waxay dad badan ku raaxeysey. Waxaa loo sawiraa si ay u qabato indhaha. Markaad aragto dad ku dhejisey jirkooda waxay aad ufudud tahay inaad ogaatid inaad ka hadasho taas.
Lotus tattoo macnaha
Laylisyada Lotus waxay noqon karaan kuwo adag oo naqshadahooda tattoo macno leh waxay sameeyeen iyaga si cajiib ah. Midabada tattoo waa waxa ku siiya macnaha kaladuwan ee #lotus. White lotus ayaa ka hadlaysa maskaxiyan iyo ruux ahaaneed. Waxay ka hadlaysaa daahfurka iyo daahirnimada.
Boorashka buluuga ah wuxuu u taagan yahay xakamaynta maskax ahaanshaha jirka. Waxay u taagan tahay xigmad, sirdoon iyo aqoon. Noocyada buluugga ah waxay u taagan tahay aragtida qarsoon ee diinta. Khudbada casaanka ah ee la yiraahdo Buddha halka fuudka casaanka ahi ka hadlayo wadnaha, naxariis iyo jacaylka oo ay ku jiraan jacaylka.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo shaati ah oo aad u isticmaali karto bedelida habka aad u eegi karto. Qaado tusaale ahaan, baadadaha ku yimaada qaababka iyo qiyaasaha kala duwan. Ma jiro qayb ka mid ah jirka oo aysan ku haboonayn. Maxay tahay macnaha tattoo? Dad badan ayaa leh macno kala duwan. Lotus #tattoo waa calaamad taas oo ah sababta ay dadka si fudud ugu tagaan iyaga gaar ahaan kuwa diinta ah kuwaas oo u arkaan macno badan oo tattoo qurux badan. Waxaa laga soo qaadi karaa kalluunka kalluunka si loo helo macne kale oo cajiib ah oo ah jacayl, guul, nasiib wacan, karti u leh adkaynta caqabadaha iyo khatarta.
Iyada oo abuurista qalinka korontada, helitaanka calaamadaysan ayaa u muuqda mid fudud oo dhexdhexaad ah kaas oo ah dad badan oo u socda socdaalkan caamka ah ee ubaxa. Xirfadlayaasha, oo mar qudh ah codsi aad u ballaadhan, waxay ku koobnaayeen inay ku xaddidan yihiin dadka isku dhafan ee ku nool xaafadaha shimbiraha. via
Loodhaanka ubaxa xayawaanka
Xaalad waliba, ka dib waqti ka dib, farsamooyinka jidhka oo mar kale ku faafay waddada oo dhan adduunka oo dhan, waana la ilaalin karaa si loo sheego in maalmahan, 4 ka baxsan dadka 10 waxay leeyihiin nooc ka mid ah qalin xagga jirkooda. via
Xirfadladani waxay u gudubtay heerkan aad uwanaagsan, marka la eego in dadku aanay isku dhajin miisaanyo aan caadi ahayn oo la abuuray oo ah aasaas u shaqeyn jireed oo abuuray taas oo runtii u furtay siyaabaha shakhsiyaadka aan jecelnahay in ay helaan maalin kasta. via
Back Lotus Tartu ubax
Marka laga soo bilaabo marka hore, warka caynkaas oo kale ah ayaa si cajiib ah loo soo saaray oo shaki la'aan ayuu u qabanayaa sida waqti dheer oo uu yimaado. via
Arm Lotus Tattoo Flower Tattoo
Shakhsiyaadka waxay ku helayaan tattoos sababo kala duwan. Waxaa jira shakhsiyado u tagaan taatikado balaaran oo muuqaal ah si ay u abuuraan aragti ama khibrad u leh aqoonsigooda iyo qaababka. via
Tartoo Cagaarka ubaxa
Fursadda aad ka mid tahay kuwa ku jira shaatiga sababo shakhsi ahaaneed ama qof u gaar ah, markaa waxaad u baahan doontaa inaad raadsato meel la isku qurxiyo si ay ugu adeegto baahiyahaaga. via
Waxay sidoo kale noqon kartaa lagama maarmaan in la soo qaado qashin lagu rido fursadda aad u leedahay in aad uga fogaato ilaha guud ee dadweynaha wakhtiga la joogo. via
Nasiib wanaag, waxaa jira tiro aad u tiro badan oo ah xaaladaha kala duwan ee suurtogalka ah in aad u hesho si aad u hesho tattoo faa'iido leh, si kastaba ha ahaatee u hayso sida aad u xishoodaan. via
Garabka Lotus Tarroo Flower
Waa meel ay ka mid yihiin gobollada ugu caansan waxayna ka dhigeysaa meel la yaab leh oo la yiraahdo tattoos iyo ereyo yar. Waxaad shaki ku jiri kartaa inaad ku daboosho gacmeed ama qurxin iyo aad diyaar u tahay. via
Lugaha ubaxa dhirta ubaxa
Waxay ka mid tahay aagagga ugu yar ee dhibcaha ah ee tattoo, waxaadna ka fekereysaa sida marka aad u baahan tahay inaad ku hayso masaafo istiraatiiji ah oo ka timaada cadaabta, sidoo kale waxay leedahay wakhti sahlan qarinta tattoo. via
Lovely Lotus tufood ubax loogu talagalay Ladies
Haysashada tattoo sida tan waa waxa ku siin kara foorarka aad u baahan tahay si aad wax uga bedesho qaabkaada. Waxaa jira dad badan oo mar walba ka fekeraya habka loo eego naqshadahooda sawiradooda. il image
Belly Lotus Tartu ubax
Back Toodhashada ubaxa ubaxa
Tartanka ubaxa lakabka ubaxa
Maxay tahay waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso ka hor intaadan helin tattoo ubax badan? Waa inaad taqaanid nooca tattoo ee aad u baahan tahay ka dibna waa inaad fahamtaa waxa tattoo uu ka hadlayo. il image
Tattoo ubax qashinka ubaxa
Tattoo ubax qurux badan
Toodhadh ubax ah oo loogu talagalay dumarka
Tartanka ubaxyada caamka ah oo la yaab leh
Markaad awooddo inaad wax ka akhrido boggaan internetka oo aad waydiiso su'aalaha xasaasiga ah ee ku saabsan tattoo gaar ah, waxay kuu sahlanaan doontaa inaad hesho sawirka ubaxaaga ubaxa. il image
Ha iloobin in tattoo kasta uu leeyahay farriin gaar ah oo ay isku dayeyso in ay ka gudubto. Markaad diyaar u tahay inaad ku dhejisid tattoo, waxaad u qaadataa wakhti si aad u fahamto waxa aad isku dayeyso inaad ka gudubto ama ku ilaaliso jirkaaga calaamad. il image
Tattoo ubax jilicsan
Qaar ka mid ah sawirrada sida joogtada ah, waa in aad taxadartaa ka hor inta aanad dhicin lacag badan oo isku dayaysa in laga saaro. il image
Halkan riix halkan si aad u aragto Lotus Flower Tattoo oo loogu talagalay gabdhaha
tattoos cagtamuusikada muusikadatattoos moontattoos saaxiib saxa ahnaqshadeynta mehndihenna tattooshimbir shimbirjimicsiga bisadahaarrow Tattoosawir gacmeedtattoo ah octopuscalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahwaxaa la dhajiyay tattoosTattoos WadnahaDhaqdhaqaaqawaxay jecel yihiin tattoostattoos qosol lehTartoo ubax badantattoos qabaa'ilkatattoos ubaxsawirada gabdhahatattoos sleeveshaatiinka shiidansawirrada raggatattoos gacantatattoo indhahaku dhaji tattoostattoos iskutallaabtakoi kalluunkaJoomatari Tattoostattoo tilmaantattoo maroodigatattoo dheemantattoos qoortafikradaha tattooTattoo infinitytattoos qorraxdagaraacista gacmahatattoos eaglelammaanahatattoos taajkiitattoo biyo ahsawirada malaa'igtalaabto laabtaTattoo FeatherTilmaamta jaalaha ahlibto libaaxgadaal u laabotaraagada kubbaddatattoos